MPANDALA FOMBA MALAGASY : « Tsy kolontsaina malagasy ny fanalan-jaza »
Miteraka resabe eny anivon’ny fiarahamonina ankehitriny ilay volavolan-dalàna mikasika ny ITG na ny fampitsaharana ny vohoka mitondra loza. 2 novembre 2021
Volavolan-dalàna izay natolotry ny Solombavambahoaka voafidy tao Tsihombe, Masy Goulamaly ary handalo fandinihan’ireo Parlemantera mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity.
Niteraka adihevitra sy resabe
Avy hatrany dia nanao ranolava ny fanehoan-kevitra isan-karazany izay mitsipaka marin-drano an’ity volavolan-dalàna ity. Anisany naneho hevitra tamin’izany, ohatra, ny Depioten’i Miarinarivo, Fetra Rakotondrasoa sy ny Depioten’Antananarivo fahatelo, Aina Rafenomanantsoa. Ireto farany izay samy nilaza fa varavarana migodana mankany amin’ny fahalalahan’ny fanalan-jaza ity lalàna ity. An-kilany, nanamafy izany ihany koa ny teo anivon’ny Fiangonana izay nanao fanambaràna fa tsy ankasitrahan’ny Fiangonana ny fanaovana tsinontsinona ny aina, izay miendrika fanalan-jaza na amin’ny endriny manao ahoana na manao ahoana. Ny lehiben’ny Fiangonana eo anivon’ny Ekar aza dia miantso an’ireo Solombavambahoaka katolika sy ireo Loholona katolika mba tsy hanaiky velively an’ity lalàna ity.
Fanitsakitsahana ny soatoavina malagasy
Nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa ireo mpandala ny maha-Malagasy. Nambaran’i Ankoay Andrianarison fa tsy kolontsaina malagasy velively izany fanalan-jaza izany ary na lazaina amin’ny fomba fiteny hafa aza rehefa manao ambanin-javatra ny aina na dia mbola any am-bohoka aza dia efa tsy kolontsaina nentin-drazana velively ary mifanipaka amin’ny soatoavina maha-Malagasy. Voalazany fa ny votoatin-kevitr’ity lalàna ity dia ny hoe : vohoka mitondra loza no hosorohina, izany hoe raha sanatria ka sembana, ohatra, ilay zaza dia hatsahatra mialoha ilay vohoka. Noho izany ve, hoy izy, dia tsy tokony ho velona izany ireny zaza sembana rehetra manerana ny tanàna ireny ? “Maninona raha tonga dia vonoina izany ilay zaza satria tsy mendrika ho velona fa sembana ? Inona izany fisainana izany ?
Niezaka be ianareo nanazava taminay foana hoe samihafa ilay hoe fanalan-jaza noho ny antony ara-pahasalamana (ITG) sy ilay fanalan-jaza an-tsitrapo (IVG), ny zavatra rehetra dia azo sorohina avokoa satria ahoana moa no tokony ho sampona ny zaza iray ? Midika izany fa tsy fanajana ny fomba sy ny fady ka hahatonga fahasembanana ho an’ilay zaza. Ao anatin’ny fomban-drazana daholo ny vahaolana rehetra mampandroso ny Firenena sy mampiaina tsara ny taranaka”, hoy ny fanazavana noentiny. Ho azy, dia tsy tokony ho voarebirebin’ny fandrosoana sy ny fomba fanaon’ireo Firenena mandroso any ivelany isika eto Madagasikara. Ny Malagasy dia anisan’ireo Firenena ary manana fomba mampiavaka azy amin’ny fametrahana ho ambony sy zava-dehibe ny aina.